Umhla My Pet » elisikiweyo Izilwanyana
ngokuthi therese Kopiwoda
Kuba phantse emihlanu iminyaka Anna iMvana, 36, uye uke wasokoliswa kukudakumba. Uye wacela uncedo koogqirha, wathabatha kagqirha ezahlukeneyo phezu amayeza counter, iivithamini, kunye udederhu amayeza endalo zonke ngelizama ukulilawula. Oko mhlawumbi ibe ekuthibazeni yeyona zamkelekile nesebenzayo ekulweni nokudakumba kwakhe, nokuba, beza kuye gaxa kuwo ngohlobo ziyatyeshelwa, nyaka esixhenxe umda ubudala shaggy ogama Mike. Umhlobo wamazibulo iyasebenza kwiqela ukuhlangulwa umda shaggy umohlwayileyo uAnna ukuzisa Mike ekhaya umvelelayo. “Kwakunzima ukuba ahlale yedwa,” ubachazela, “nzima ukuza ekhaya ngamaxesha. Into kuphela ejongene nam etshayela, kamabonwakude, ikhompyutha, ngomnxeba; hayi enye into ephilayo. Mike iye yatshintsha ukuba. Itís intle ukuza ekhaya yaye endilinde kum. Omnye endifunda wada wathi kum
elingephi emva kokuqhawula Mike ukuba isimo bam batshintsha. Ndaziva ndonwabile.”
Abaphandi isebenzela ukuqinisekisa ukuba ngaba kukho nayiphi na ubungqina kagqirha esebenzayo ukuxhasa oko abanini pet ezifana Anna sigxina lonke, ukuba izilwanyana kwenza umahluko HIV kubomi babo. Kwiminyaka yakutshanje ndenze izifundo sele kunye namaqela abantu ezifana abo bahlala bodwa, abadala, yaye ezitshatileyo ukubona ngenelo impilo, ukuba kukhona enye, esizifumana ukuba nesilwanyana. Ezi zifundo ziye zabandakanya ujonge emzimbeni kwakunye kwanamava ubunini pet.
Karen Allen, Research Scientist evela kwiSebe Medicine, State University of New York e Buffalo, ingcaphephe kuphando iziphumo nokomzimba nezilwanyana abantu. Omnye izifundo zakhe inxaxheba 48 stockbrokers, bonke abo baye liphathwa ACE inhibitors, amayeza kuba uxinzelelo oluphezulu lwegazi. bonke Bahlala yodwa yaye elingasilole izilwanyana iminyaka emihlanu ubuncinane phambi isifundo. Allen wanyula abantu babekwazi nomnqweno ukunyamekela isilwanyana. 'Ndifuna ukuqinisekisa ukuba aba bantu enembopheleleko yokusindisa,’ uthi. Wenza ukuba ngamnye kubo uza ukwamkela isilwanyana ebomini babo nabo ukuba baye bakhethwa ukuba babe yinxalenye yeqela ukuba isabelo izilwanyana. Xa waqalisa isifundo, isiqingatha nxaxheba ezakhethelwa efunisela waza wacela ukuba bafumane ukukhetha inja okanye ikati. Ekupheleni kweenyanga ezintandathu, xa bonke abafumana ACE inhibitors, abo bantu kwiqela pet-ongumnini wahlala kakhulu izinzile nangakumbi ngamaxesha ndixinezeleke kunabo ngaphandle izilwanyana. Babonisa ngaphantsi yokwanda kwamanqanaba uxinzelelo nentliziyo igazi ngaphezu iqela non pet-umnini. Emva kokuba uphononongo yagqitywa, kwaye nxaxheba baxelelwa iziphumo, Allen uthi, 'Ba sigcina izilwanyana, kwaye eneneni, ubuncinane isiqingatha sabantu [kuphononongo] ayeyifumana iziyobisi waphuma waza wafumana izilwanyana.’
“Enye sifumanisa umdla kubonakala ukuba baye bafumanisa,” Allen uthi, “kukuba abantu abafowunelwa zentlalo nane ngathi kuzuza kakhulu. Sicinga kungenxa izilwanyana ithathe uhlobo oluthile inkxaso yoluntu.” Iprojekthi yophando ngaphambili zange inxaxheba abafazi abadala, owayehlala yedwa, na isilwanyana. Wafumanisa ukuba bakholisa ukuba isebenze ngakumbi lwegazi uxinzelelo ngaphantsi nabanye abafazi abadala abahlala bodwa kunye zasekhaya kunye. Kuba izilwanyana zifuna ingqwalasela kunye umthambo, kaninzi oku kwenza nangaphezulu esebenzayo abanini babo kunoogxa babo abangenazo izilo. Ukongezelela, eli lungiselelo lokwandisa echithelwe izibonelelo zempilo ezifana ukudandatheka kangako, kwaye nokwanda zokuziphatha zasentlalweni, leyo kuphela singqiniwe ukuba luncedo kwimpilo yethu.
Ngoko ke, ukuba ebuya kwi khusi kwaye amkele Fido ukuphucula impilo yakho? Ukuba konke kuxhomekeke. Ngokutsho Allen, abantu kuzuza kakhulu ukuba izilwanyana abo bajonga isilwanyana njengelungu yamonga lentsapho. Usenokucinga uAna nangona, oye wafumana umhlobo osenyongweni, pseudo ingcali kwi inja yakhe, Mike. “Nguye yayibathanda kakhulu,” uAnna uthi. “Mikie ujonga kum ngamehlo akhe enkulu emdaka inyanzela kum ukuba xa ndikunye edandathekileyo. Kunzima xa nto becela ukuba asindise ubomi bakhe kwaye ke ngaphandle kodwa kubonakala uyikhathalele indlela endivakalelwa. Ngoku ke umntu ukuze akwazi ukondla.” Kodwa inyaniso kukuba, bobabini Anna kunye uMike umntu ukuze akwazi ukondla.
Yiba Crush? Apha Indlela sibaxelele